Saturday December 12, 2020 - 08:52:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xukuumadda dabadhilifka Alqmarib ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay caadiyaysay xiriirka kala dhaxeeya maamulka Yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta falasdiin.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka shaqeysay sidii ay usaaxiibi lahaayeen dowladda Almaqrib iyo maamulka Yyahuudda Sahyuuniyadda iyadoo qeyb ka ah mashruuca ballaaran ee lagu caadiyaynayo cilaaqaadka"Isra'el" iyo dawaaqiidda carbeed.
Aqalka cad ayaa sheegay in Trump iyo Max'med-ka lixaad ee Marocco ay khadka taleefanka kuwada hadaleen ayna ku heshiiyeen in xukuumadda Rabaad ay dib usoo celiso xiriirkii diblumaasiyadeed ee Yahuudda kala dhaxeeyay kaasi oo go'ay sanaddii 2000 xilligaas oo ay qaraxday Intifaadadii Falasdiin kadib markii Shaaroon-kii halaagsamay uu gudaha ugalay Masjidka barakaysan ee Al-aqsaa.
Sida ku cad heshiiska Mareykanka ayaa aqoonsaday in gobolka Saxaraha galbeed uu kamid yahay dalweynaha Almaqrib ama Marocco wuxuuna bixin doonaa lacag dhan 3 Bilyan oo dollar oo maalgashi ahaan loosiinayo xukuumadda Rabaad, taas bedelkeed Alqmarib waxay ogolaatay in ay ku biirto tareenka Tabiica dhanka Yahuudda waxayna dib usoo celinaysaa dhammaan xiriirkii diblumaasiyadeed,midkii amni iyo midkii dhaqaale ee kala dhaxeeyay waxa loogu yeero Israa'iil.
Binyamiin netenyaahu oo ah R/wasaaraha Yahuudda ayaa isna sheegay in uu dareemayo farxadweyn uuna bogaadinayo go'aanka uu qaatay boqor Maxamed-ka lixaad ee Marocco, waa dowladdii Afaraad oo katirsan dawaaqiidda carabta ee sanadkaan gudihiisa iclaamiso in ay lasaaxiibtay Yahuudda, dowladaha kala ah Baxreyn,Imaaraatka iyo Suudaan ayaa horay ugu dhawaaqay tallaab middan lamid ah.
Diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa dalxiiska Yahuudda ayaa uduuli doona magaalooyinka waaweyn ee wadanka Almaqrib waxayna labada dowladood isdhaafsan doonaan badeecadaha ganacsiga sida ku cad heshiiskan.
Kooxaha muqaawamada falasdiin oo arrintan ka jawaabay ayaa dhaleeceeyay waxayna sheegeen in Marocco ay ku biirtay khawanada carbeed ee dhabarka ka toogtay qadiyadda Masiiriga ah ee reer Falasdiin